Kudutshulwe kwabulawa iphoyisa eMbali | News24
Kudutshulwe kwabulawa iphoyisa eMbali
KUDUTSHULWE kwabulawa iphoyisa ngaphandle kwendawo yobumnandi i-033 Lifestyle eMbali Unit 3 ngoMsombuluko izintatha.
UConstable Sandile Gwala (32) obesebenzela esiteshini samaphoyisa i-Mountain Rose ophikweni lwe-Crime Prevention kuthiwa udutshulwe wabulawa ngomunye unogada wase-033 Lifestyle ngezintathakusa zangoMsombuluko.
Ngokuthola kwe-Echo kuthiwa lesi sigameko senzeke sekudlule ngisho ihora lesibili ekuseni ngoMsombuluko.
UConstable Gwala kuthiwa ubengasebenzi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko kodwa ubehambe eyozijabulisa nabangane bakhe. Umufi kuthiwa wadubuleka ekhanda. Kuboshwe uMnu Sanele Mthimkhulu (35) ngalesi sigameko kanti uvele okokuqala eNkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu ngoLwesibili nalapho kade emelwe khona uMnu Phumlani Fakude. Icala lakhe libe selihlehliswa ngemuva kokuba umphenyi wecala engazange abe khona enkantolo ngesikhathi kubizwa leli cala. Lowo omele umbuso uNkk Patti Davids uthe umbuso awuphikisani nokuthi umsolwa adedelwe ngebheyili. Umsolwa bekulindeleke ukuba avele futhi enkantolo izolo (ngoLwesithathu) nalapho kade kulindeleke khona ukuba afake isiceleo sebheyili.
Umnikazi walendawo uMnu Bonga Ndaba uthe babuhlungu kakhulu ngalsi sigameko. Uthe unogada wabo wayezama ukukawula umufi nowayexabana nabanye abantu ababephuma kuyona le ndawo ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.
Ekhuluma ne-Echo uMnuz Ndaba uthe : “Bese sivalile thina ngesikhathi kwenzeken lesi sigameko kwazise senzeke ngaphandle kwamagceke ethi. Unogada wathi ubone kunengxabano ngaphandle nebibandakanye yena ukuthi wabe esephuthuma ethi uyolamula. Ubhuti lona odubulekile ube eseqala eshaya unogada wethu wamkhiphela nesibhamu. Unogadaube esekhipha isibhamu naye nokuyilapho kudubuleke khona umufi wabe eseyashona. Sonke lesi sigameko sibe iphutha ngoba nonogada naye ubethi uyazivikela.
“Ngemuva kokuba sekwenzeke lesigameko unogada ube esebiza amaphoyisa nafike umufi eselele phansi nesibhamu esikhokhiwe eduze kwakho,” ubeke kanje.
Uqhube wathi abahambisana neze nokwenzekile wathi futhi uyathemba ukuthi bekugcina ukuthi kwenzeke into efana nalena.
“Siyazwelana kakhulu nomndeni olahlekelwe futhi sifuna ukudlulisa namazwi Nduduzo kubona. Buhlungu ngempela lento eyenzekile sifisa ukuthi abezinhlaka zokuphepha bangenelele.
‘Inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi abantu abaningi bavele bafike bapake izimoto zabo ngaphandle bakhiphe nezitulo kube sengathi isepaki. Akukho muntu obhekelele ukuphepha kwabantu abangaphandle njengoba ezethu zokuphepha zibhekelele abantu abangaphakathi kuphela. Into eyenzekayo uma ngabe labantu sebexabana abasebenzi bethu bayazama ukuthi balamule uma bebonile yize kungasiwona umsebenzi wabo nokuyinto eyenzekile ngoMsombuluko.
“Akukho muntu olawula ngaphandl kwalendawo ukuthi abant u bangazenzeli umthanda njengokuphuzela esidlangalaleni ngoba ekugcineni leyonto ibuyela kuthina njengabantu base-033.”
Sekungokwesibili kulonyaka ukuba kudutshulwe kubulawe umuntu ngaphandle kwalendawo yobumnandi. Ngenyanga kaNhlolanja kwadutshulwa kwabulawa uMnu Thembelani Nsele (33) ngaphandle kwayo lendawo nokusolwa ukuthi naye wayelamula abafana ababebanga umuntu wesifazane.